» कुलमान बाहेक अर्काे मान्छे छैन त ? कुलमान बूढाे भएपछि सरकारले के गर्छ ? : गजेन्द्रबहादुर महत
२८ श्रावण २०७८, बिहीबार १५:२७
काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले वर्तमान सरकारले कुलमान मात्रै देखेको भन्दै टिप्पणी गर्नुभएकाे छ । प्रतिनिधि सभाकाे आज बिहीवारकाे बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य महतले यस्ताे टिप्पणी गर्नुभएकाे हाे ।
सरकारले कुलमान घिसिङ बाहेक अर्को मान्छे नभएको जस्तो गरेको भन्दै उहाँले कुलमान बूढो भएपछि सरकारले के गर्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । डुबेका नेपाल एअरलाइन्स लगायतका संस्थानतर्फ पनि सांसद महतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘पुरानो सरकारले हनुमान मात्रै देख्यो । याे सरकारले कुलमान मात्रै देख्यो । एउटा सरकारले हनुमान बाहेक अरू नदेख्ने, एउटा सरकारले कुलमान बाहेक अरू नदेख्ने । यसको मतलब मैले कुलमानलाई हनुमानसँग दाँजेको होइन, हनुमानले त हाम्रो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धुजाधुजा पारिहाले । पाँच महिनाको तलब एकै पटक हाजिर नभएका मान्छेलाई कर्मचारीले खुवाइरहेका छन् । कुलमानले विद्युत् प्राधिकरणलाई फाइदामै ल्याएका छन् । तर कुलमानबाहेक अर्को मान्छे छैन त ? कुलमान बूढो भएपछि के गर्छ त यो सरकारले ? कुलमान बूढो भएपछि अर्को कुलमान कसरी खोज्छ त ? विद्युत् प्राधिकरण मात्रै छ ? कुलमान मात्रै छ ? नेपाल एअरलाइन्स छैन ? अरू संस्थान डुबेका छैनन् ? खालि किन कुलमान मात्रै ?’